Izifanekiso ze-88 amakhasi zokwakha i-Resume ephelele | Ngivela kwa-mac
Izifanekiso ezingama-88 amakhasi zokwenza i-resume ephelele
Lapho sakha idokhumenti kusukela ekuqaleni, kungenzeka ukuthi uma singakuthandi kakhulu ukwakhiwa, kungasilahlekisela ukwethuka ukuqala ukubhala igama elilodwa. Ngenhlanhla, singazisebenzisa izifanekiso ukuqala ukuthola umbono walokho esikudingayo. Ama-templates asivumela ukuthi siguqule zonke izici zombhalo, sizenze ngezifiso kube ngathi ezethu. Yize I-Microsoft Word uhlelo oluhle kakhulu olutholakala emakethe futhi esingadala ngalo noma yiluphi uhlobo lwedokhumende, i-Apple Pages nayo iyindlela ehlukile, ikakhulukazi manje njengoba itholakala ngokuphelele kubo bonke abasebenzisi abane-ID ye-Apple.
Uma kukhulunywa ngokwenza kabusha, futhi kuthiwa ngumuntu obone abaningi empilweni yakhe yonke ngomsebenzi wami, kufanele kukhunjulwe ukuthi kumayelana nokunikeza imininingwane ephezulu kakhulu endaweni encane kunazo zonke, imininingwane ebalulekile, ngakho ukuthi uma sesiya kwinhlolokhono yomsebenzi singanweba idatha ehlobene nolwazi lwethu nomsebenzi owedlule. Ngaphezu kwalokho, i-aesthetics efanayo kufanele ikhange ngokwanele ukuze ikwazi ukufinyelela kulo lonke ulwazi ngokushesha ngaphandle kokuchitha isikhathi esiningi kukho.
Qalisa kabusha i-Mate - Izibonisi zokwakhiwa kwamakhasi yisixazululo esifanelekile sezidingo zokwenza i-resume ephelele. Lolu hlelo lusinikeza kuze kufike kuma-templates ekhwalithi ahlukahlukene angama-88, izifanekiso esingazenza ngokwezifiso kuzo zonke izici ukuze zivumelane nezidingo zabo bonke abasebenzisi. Qalisa kabusha i-Mate - Izifanekiso zokwakha ngamakhasi zinentengo ejwayelekile yama-euro angu-4,99, kepha isikhathi esilinganiselwe singazilanda mahhala. Idinga i-MacOS 10.10 noma eyakamuva kanye ne-processor engu-64-bit. Isikhala esidingekayo ukufaka lolu hlelo ngu-180 MB futhi singasilanda ngesixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Izinhlelo ze-Mac » Izifanekiso ezingama-88 amakhasi zokwenza i-resume ephelele
Sebesusiwe, ngabe ikhona indlela yokubathola manje? ngibona kakhulu
Ama-AudioNotes uhlelo olusha lokurekhoda amanothi alalelwayo kwi-Mac
Uma ngifaka i-SSD disk ku-Mac, kufanele ngilungiselele i-TRIM?